Cyprus inobvisira vatorwa makumi mana nevasere pasipoti yavo yeGoridhe Visa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cyprus Kupwanya Nhau » Cyprus inobvisira vatorwa makumi mana nevasere pasipoti yavo yeGoridhe Visa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Cyprus Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Cyprus inobvisira vatorwa makumi mana nevasere pasipoti yavo yeGoridhe Visa.
European Commission yakashoropodza Kupa nekupa mapasipoti, ichiti "tsika dzeEurope hadzisi kutengeswa," uye ichipomera chirongwa che "kutengesa kuva mugari wemuEurope nemari inowanikwa."
Cyprus inosarudza kubvisa ugari hweCypriot kune 39 vanoita mari uye nhengo nhanhatu dzemhuri dzavo.
Cyprus iri kuongorora zvakare mamwe matanhatu kesi, uye yakaisa mamwe makumi mana nematatu pasi pekuongororwazve.
Cyprus yakabvumirana muna Gumiguru gore rakapera kupedza chirongwa cheGold Visa Visa munaNovember 1, 2020.
Vakuru vehurumende yeCyprus vataura nhasi kuti vachayeuka zviri pamutemo 'Gold Visa' mari-yekuva mugari mapasipoti kubva kune makumi matatu nevatatu vakawana ugari hweCypriot pasi pechirongwa chinonyadzisa chekudyara. Vatanhatu vevanovimba navo vachatorerwawo mapasipoti eCypriot.
Saipurasi Kanzuru yeMakurukota yazivisa danho rekubvisa "ugari hweCypriot kune vanoita 39 uye nhengo nhanhatu dzemhuri dzavo," isingatauri mazita evanokanganiswa zvakadaro.
Hurumende inonzi iri kuongorora dzimwe mhosva nhanhatu dzekubiridzira, uye yaisa mamwe makumi mana nenomwe "achingoramba achiongororwa… pachishandiswa nzira dzakapihwa."
Cyprus yakabvumirana muna Gumiguru gore rapera kuti ipedze Goridhe Visa chirongwae munaNovember 1, 2020, iyo yainge yabvumidza vatorwa kuwana kodzero dzekugara pamwe nehugari hwemo mukudzosera mari yavo yekudyara mamirioni munyika. Kuti vakwanise, vanhu vamwe chete vaifanirwa kuisa, 2 mamirioni eurandi ($ 2.43 mamirioni) muzvivakwa zveCyprus pamusoro pechipo kuhurumende yekutsvagisa mari.
Chirongwa, chakatumidzwa mari-ye-chizvarwa.
Vanhu vanosvika zviuru zvisere vanofungidzirwa kuti vakawana ugari pasi pechirongwa ichi usati wavharwa, nehurumende yakadomwa komisheni yakazoona kuti vanopfuura makumi mashanu nezvitatu kubva muzana yeavo vakagamuchira pasipoti nenzira iyi vakaita zvisiri pamutemo.
Kana munhu angogamuchira pasipoti yeCypriot, ivo vanokwanisa kufamba, kushanda, uye kugara mune chero dzimwe nyika dzeEuropean Union. Pakutanga, European Commission yakashoropodza Saipurasi yekupa mapasipoti, vachiti "tsika dzeEurope hadzisi kutengeswa," uye kupomera zano rekuti "kutengesa hugari hweEurope kuti uwane mari."
Mabhizinesi ekufamba kuti apedze zvakawanda pane tekinoroji gore rinouya
Aimbove mukuru weGE anonzi CEO weUnical Aviation